မိသားစုဝင်တွေပါလိုက်ပို့ခွင့်မရတဲ့ ဦးရန်ပိုင်စိုးရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကို သေသေချာချာလေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ အောင်သော်နဲ့ မေတ္တာမြင့်မြတ်ဟိန်း - TGI Daily News
ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးကတော့ ဒီနေ့မှာပဲ လူ့လောကကြီးကနေ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူကတော့ သရုပ်ဆောင်၊အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သလို အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်လည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ဦးရန်ပိုင်စိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Covid-19 ရောဂါကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ဦးရန်ပိုင်စိုးရဲ့နာရေးသတင်းကတော့ အနုပညာလောကသားတွေအားလုံးကို စိတ်မကောင်းဖြစ်စေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဦးရန်ပိုင်စိုးအတွက် အနုပညာရှင်အားလုံးက ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေကြသလို စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရကြောင်းကိုလည်း သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်စာမျက်နှာထက်မှာ ကိုယ်စီရေးသားပြောပြနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း Volunteer အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ လူရွှင်တော်အောင်သော်နဲ့ မေတ္တာမြင့်မြတ်ဟိန်းတို့က ဦးရန်ပိုင်စိုးရဲ့နာရေးကိစ္စတွေကို စီစဉ်ပေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မိသားစုဝင်တွေ လိုက်ပါပို့ဆောင်ခွင့်မရတဲ့ ဦးရန်ပိုင်စိုးရဲ့ဈာပနခရီးကို အောင်သော်တို့က သေသေချာချာလေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အောင်သော်က “ဘဝရဲ့နေဝင်ချိန်ကိုဒီလိုသွားရမလဲလို့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလေအိူကိုတာတူး(ခေါ်)အစ်ကိုရန်ပိုင်စိုးရေကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်အောင်တိုက်နေပါတယ်အစ်ကိုရေ လိုက်ပါပို့ဆောင့်ပေးခွင့်ရတာကိုပဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် Aung Thaw.5Stars” ဆိုပြီးရေးသားထားသလို မေတ္တာမြင့်မြတ်ဟိန်းကလည်း “ကျွန်တော်တို့ Golden Middle Way( GMW ) အသင်းရဲ့Covid ရောဂါပိုး ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရင်းက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမိတဲ့ လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခု စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြင့် လေးလေးရန်ပိုင်စိုး ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေ..Covid ရေ…မင်းတော်သင့်ပြီနော်” ဆိုပြီး ပြောထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဦးရန်ပိုင်စိုးရဲ့နောက်ဆုံးခရီးက ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Source & Photo Credit-Aung Thaw’s FB Acc & Myittar Myint Myat Hein
မိသားစုဝငျတှပေါလိုကျပို့ခှငျ့မရတဲ့ ဦးရနျပိုငျစိုးရဲ့နောကျဆုံးခရီးကို သသေခြောခြာလေး စီစဥျဆောငျရှကျပေးခဲ့တဲ့ အောငျသျောနဲ့ မတ်ေတာမွငျ့မွတျဟိနျး
ပရိသတျတှခေဈြရတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးကတော့ ဒီနမှေ့ာပဲ လူ့လောကကွီးကနေ ထှကျခှာသှားခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ ။ သူကတော့ သရုပျဆောငျ၊အဆိုတျောတဈဦးဖွဈသလို အစီအစဥျတငျဆကျသူအဖွဈလညျး လုပျကိုငျခဲ့တဲ့ ဦးရနျပိုငျစိုးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ Covid-19 ရောဂါကွောငျ့ ကှယျလှနျသှားခဲ့တဲ့ ဦးရနျပိုငျစိုးရဲ့နာရေးသတငျးကတော့ အနုပညာလောကသားတှအေားလုံးကို စိတျမကောငျးဖွဈစခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။
ဦးရနျပိုငျစိုးအတှကျ အနုပညာရှငျအားလုံးက ဝမျးနညျးကွကှေဲနကွေသလို စိတျမကောငျးဖွဈနရေကွောငျးကိုလညျး သူတို့ရဲ့လူမှုကှနျစာမကျြနှာထကျမှာ ကိုယျစီရေးသားပွောပွနကွေတာ ဖွဈပါတယျ ။ အခုလညျး Volunteer အဖွဈ ဆောငျရှကျနကွေတဲ့ လူရှငျတျောအောငျသျောနဲ့ မတ်ေတာမွငျ့မွတျဟိနျးတို့က ဦးရနျပိုငျစိုးရဲ့နာရေးကိစ်စတှကေို စီစဥျပေးခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ ။ မိသားစုဝငျတှေ လိုကျပါပို့ဆောငျခှငျ့မရတဲ့ ဦးရနျပိုငျစိုးရဲ့စြာပနခရီးကို အောငျသျောတို့က သသေခြောခြာလေး ကူညီဆောငျရှကျပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။
အောငျသျောက “ဘဝရဲ့နဝေငျခြိနျကိုဒီလိုသှားရမလဲလို့ဘယျသူမှမသိနိုငျဘူးလအေိူကိုတာတူး(ချေါ)အဈကိုရနျပိုငျစိုးရကြှေနျတျောတို့ဒီတိုကျပှဲကိုအောငျမွငျအောငျတိုကျနပေါတယျအဈကိုရေ လိုကျပါပို့ဆောငျ့ပေးခှငျ့ရတာကိုပဲ ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ Aung Thaw.5Stars” ဆိုပွီးရေးသားထားသလို မတ်ေတာမွငျ့မွတျဟိနျးကလညျး “ကြှနျတျောတို့ Golden Middle Way( GMW ) အသငျးရဲ့Covid ရောဂါပိုး ကာကှယျတိုကျဖကျြရငျးက ကူညီဆောငျရှကျပေးမိတဲ့ လမျးကွောငျးလေးတဈခု စိတျမကောငျးခွငျးမြားစှာဖွငျ့ လေးလေးရနျပိုငျစိုး ကောငျးရာမှနျရာရောကျပါစေ..Covid ရေ…မငျးတျောသငျ့ပွီနျော” ဆိုပွီး ပွောထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဦးရနျပိုငျစိုးရဲ့နောကျဆုံးခရီးက ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော ။